Machinelọ ọrụ igwe ọzọ - China Ndị ọzọ na-emepụta igwe, ndị na-eweta ya
Full-Automatic PTFE teepu asọfe igwe
Plastic PTFE ọkara akpaka Nkedo Machine
Ebe ọ bụ na PTFE agaghị asọfe n'elu agbaze ya, ọ nweghị ike ịkpụzi ya ma chọọ usoro nhazi pụrụ iche. Kpụrụ PTFE na-esichara site mbụ mkpakọ ịkpụzi ntụ ntụ n'ime preforms, na mgbe sintering preform na a usoro yiri sintered metal nhazi. Usoro a na -emepụta ụdị geometric nke enwere ike ịhazi ya, jikọta ya, na / ma ọ bụ welded. Product nkọwa maka Automatic Nkedo: Automatic ịkpụzi, a ọkara akpaghị aka ụdị mkpakọ ịkpụzi, bụ proces ...
Automatic PTFE Hydraulic Press Nkedo Machine
1. Njirimara nke PTFE Nkedo Machine Nkedo Machines na-ekewa n'ime ntuziaka, ọkara akpaka na n'ụzọ zuru ezu akpaka ịkpụzi igwe. Site na-aga n'ihu mma nke ịkpụzi pịa technology, na akụrụngwa nwere ọgụgụ isi, ndị ọzọ mụ, na ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma. Pdị akpaka nwere ọgụgụ isi na-ejikwa usoro PLC, ịtọ nrụgide, nso, ọsọ, oke, na oge obibi, na ọrụ ahụ dị mfe. Na iche iche imewe, na akụrụngwa nwere ike izute dị iche iche mkpa nke ọrụ, ihe ...
SYH-50 Ngwakọta Atọ
Workingkpụrụ Ọrụ: A na-akụda gbọm na-agwakọta na njedebe nke isi ma na-arụ ọrụ axles site na abụọ Y-ụdị njikọta ụwa. Nkwonkwo abụọ ahụ jikọtara ibe ha na n'akụkụ ibe ha na mbara igwe. Mgbe adọkpụ ụgbọala na-adọkpụ ma gbanwee, kadrel envoy gbọmgbọm na-agagharị ugboro ugboro na mbara igwe, dịka ntụgharị, ntụgharị na mpịakọta. Ihe ndị dị na cylinder na-esochi usoro ngwakọta atọ dị n'akụkụ axial, radial na gburugburu. Ọtụtụ ụdị ihe na t ...
The v-100 PTFE ntụ ntụ igwekota
Ngwá ọrụ teknụzụ akụrụngwa: 1, Mixgwakọta gbọmgbọm dum nke 100L, ikike njikwa ihe: 40-50L 2, Akụrụngwa isi ike moto 1.5 kw. 3, Mixgwakọta oge Ntọala Dijitalụ 0-99 nkeji, oge mmechi. 4, ọkọnọ ike: 380V / 220V / 50Hz. Nkebi nke 1: Nchịkọta akụrụngwa Aha njirimara: -dị igwekota V ụdị ihe atụ qu V-100Equifo nọmba ： otu setịpụrụ ihe eji eme ihe: Maka ngwakọta nke ntụ ntụ Ihe ndị achọrọ: 1, Ihe ọ bụla 40-50L / ngwakọta ngwakọta, ma ghara iweta adịghị ọcha ọ bụla na usoro ahụ. nke inggwakọta ...
6 Barrel ntụ ntụ igwekota
1. Ejiri isii 10L / 2-3KG na-agwakọta orù n'otu oge, ma gbanwee n'otu oge ahụ dị ka mgbanwe ahụ, ọgbaghara 30 kwa nkeji na ntụgharị 40 kwa nkeji. 2. nọdụ ihu na ọsọ nwere ike gbanwee dịka ihe ndị ọrụ aka chọrọ, na 1.5kw 2P mbelata moto. 3. Hazie mgba ọkụ nkwụsị mberede, tọọ usoro iheomume. 4. Hazie bọket 10 na-agwakọta bọket nwere ikike nke 10L. 5. 380V 50Hz 3P.